गुगलले बन्द गर्दैछ ‘सर्च’ फिचर, थाहा पाउनु भो ? - Samudrapari.com
गुगलले बन्द गर्दैछ ‘सर्च’ फिचर, थाहा पाउनु भो ?
५३९५ पटक हेरिएको
काठमाडौं – गुगलले आफ्नो तत्कालै सर्च गर्ने इन्स्टेन्ट सर्च फिचर बन्द गर्दैछ । जब तपाईं सर्च बारमा आफुले सर्च गर्न खोजेको केही शव्द लेख्नुहुन्छ तब ड्रप डाउन मेनूमा सर्चसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरु देखापर्दछन्, त्यो नै इन्स्टेन्ट सर्च हो । तर अब यो फिचर गुगलले बन्द गर्न लागेको छ ।
गुगलका अनुसार अब धेरैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले डेस्कटपको साटो मोबाइलबाटै सर्च गर्दछन् । त्यसैल इन्स्टेन्ट सर्चको खासै आवश्यकता रहेन । स्मरण रहोस् गुगलले सन् २०१० मा इन्स्टेन्ट सर्च फिचर लञ्च गरेको थियो । तर सन् २०१५ मा मोबाइलबाट हुने सर्चहरु डेस्कटपबाट हुने सर्चभन्दा बढी भएसँगै उसले यो फिचर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्च इन्जिन ल्याण्डसँग कुरा गर्दै गुगलका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हामीले २०१० मा गुगल इन्स्टेन्ट लञ्च गरेका थियौं । यसको उद्देश्य पयोगकर्तालाई छिटो भन्दा छिटो खोजेको जानकारी उपलब्ध गराउनु थियो । यति छिटो की उसले आफुले खोजेको कुरा पूरै टाइप नगर्दै जवाफ मिलोस् । तर पछिल्लो समयमा गुगलमा धेरै सर्च मोबाइलबाट हुन थाले जसको इनपुट, इन्ट्र्याक्सन तथा स्त्रिनका सीमाहरु निकै अलग हुन्छन् डेस्कटपममा भन्दा । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले गुगल इन्स्टेन्ट सर्च बन्द गर्ने निधोमा पुगेका हौं, ता कि हामीले सबै डिभाइसको लागि सर्चिङलाई फास्ट बनाउन सकौ ।’
गुगलका अनुसार इन्स्टेन्ट फिचर बन्द भइसकेपछि गुगलमा सर्च गर्दा सर्च बारमा केही कुरा टाइप गर्दा ड्रपडाउन मेनूमा सम्बन्धित शीर्षकहरु आउन बन्द हुने चाहीँ होइन । गुगलले सर्च गर्दा तपाईंलाई काम लाग्ने सुझाव दिइरहने नै छ ।
तर फरक यत्ति मात्र हो की नतिजामा आउने सुझावमा तपाईंले क्लिक गर्नुपर्नेछ । जबकी इन्स्टेन्ट सर्चमा आफ्नो कुनै प्रश्न सर्च बक्समा टाइप गरेसँगै गुगलले आफै सर्च रिजल्ट देखाउन थाल्दथ्यो र त्यसलाई तपाईं टेक्स्टमा बदल्न सक्नुहुन्थ्यो । -एजेन्सी
गलत काम गर्नेमाथि यसरी लगाम कस्दैछ ट्वीटर
बालबालिकालाई इन्टरनेट, मोबाइल वा टिभी एडिक्सनबाट कसरी बचाउने?
भीभोको नयाँ फोनमा ‘क्लिएर फोटो र पर्फेक्ट सेल्फी’ सुविधा
०१२३४५६ र १२३४५६ नम्बरको फोन नउठाउन टेलिकमको आग्रह
गुगलको नयाँ एयरबडले ४० भाषामा उल्था गर्न सक्ने